Haddii aad leedahay qoys | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay qoys
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 15 4 2019
Dhanka boggagan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa fiican in laga fikiro marka adiga iyo qoyskaagu aad heshaan sharciga deganaansho. Waxaad xitaa dheeraad ka ogaan kartaa dib u mideynta qoyska haddii qoyskaagu aanu halkan kula iman adiga.
Waa muhiim in adiga iyo xubnaha qoyskaagu aad heshaan tobanka lambar iyo kaarka aqoonsiga sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah. Tani waxay lagama maarmaan u tahay si aaad u awoodaan inaad:
Bilowdaan barnaamijka qorshaynta,
furataan xisaab bangi
saxeexdaan heshiis guri
u codsataan amaahda alaabta guriga,
u codsataan noocyada kaalmo ee kala duwan (kaalmada caruurta, kaalmada kirada, kaalmada la siiyo caruurta hal waalid oo keliya la nool, gunada waalidnimada iyo lacagta hawl-gabka kana yimaada Qasnada Caymiska) ama
ilmahaaga geli safka dugsiga xanaanada.
Akhri dheeraad ku saabsan inaad bilowdo noloshaada cusub ee Iswiidhan. Ahkri dheeraad ku saabsan iskoolka. Akhri wixi ku saabsan in la codsado amaahda alaabta guriga kuna qoran bogga ku saabsan hoyga. Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan in waalid lagu ahaado gudaha Iswiidhan. Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan taageerada kala duwan iyo kaalmada loogu talogalay qoysaska. Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan in dhalinyaro lagu ahaado gudaha Iswiidhan.
Filimida ku saabsan Qasnada Caymiska
In lagu jiro fasax waalidnimo Dib u mideynta qoyska Soo booqdayaal ka yimi dalka dibediisa Dugsi